IINGCAMANGO ZOMGANGATHO WOBUHLOBO WE-ECO - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iingcamango zomgangatho ococekileyo we-Eco
Iingcamango zomgangatho ococekileyo we-Eco
Wamkelekile kwiphepha lethu ebonisa ezona ntlobo zintle ze-eco. Kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, yayixabisa kakhulu, yayidika, kwaye ukhetho lwalunomda. Kodwa ngoku indawo yentengiso izaliswe ngamanzi kukhetho. Ukusuka kwikhaphethi ukuya elityeni kuyo yonke indawo phakathi, kukho umgangatho wendalo kuwo wonke umntu. Apha ngezantsi siza kugubungela izibonelelo zokhetho lwemigangatho yendalo kwaye sigqamisa ukuba zeziphi ezenza zilungele ukusetyenziswa ekhayeni lakho.
Izinto zendalo zisisiseko esihle kuyilo oluhle, ngakumbi nangakumbi xa zenziwe ngendlela eco-friendly. Ukusuka kwimfudumalo yeklasikhi yokuqhekeka ngamatye e-lava, nazi iinketho zokwenza i-eco apho abaqulunqi bathanda ukubeka kumakhaya abo.
Uqalo - I-bamboo luhambile, inokubonakala ngathi yeyangoku okanye yesiko, inokuhlala kamnandi ekhitshini lasefama elizweni okanye kwezona ndawo zinobunkunkqele kwii-lofts zedolophu. Bukela abavelisi abasebenzisa iFormaldehyde kunye neeVOC's kwinkqubo yabo yokuvelisa, ukuba bayazisebenzisa ezi khemikhali, azikho eco-friendly!
Uqalo lukhula ngokukhawuleza, lufikelela ekuvuthweni malunga neminyaka emi-5, luyachuma kwaye kwezinye iindawo, luthathwa njengesityalo esiyinkathazo, ke yinto enkulu phakathi kwezixhobo ezihlaziyekayo. Ukuba nomgangatho wokhokho kulula, yitshayele okanye usete iarobhothi yakho ikhulule izihlandlo ezimbalwa ngeveki, ukukhupha umpopu omdaka xa kufuneka, akukho khemikhali zirhabaxa okanye i-wax eyimfuneko.
Umgangatho woqalo iyamelana ngakumbi namanzi uninzi lomthi onzima, kodwa musa ukuvumela isiziba sihlale apho, iibhodi zinokudilika ukuba uvumela amanzi ahlale. Ukuba ufudukela kwikhaya elinemigangatho yoqalo eyonakaliswe sisilwanyana sasekhaya, ungaphelelwa lithemba, zilungiswa ngokulula ngesanti kunye nokutywinwa, qiniseka nje ukuba isitywina sisezantsi okanye akukho VOC yokugcina umgangatho womoya ongaphakathi kwaye uhlala ulungile. Ngenxa yokuba zinokuphuculwa ngokulula, zizinto zokubeka umgangatho wobomi ezinokutshintsha kuzo zonke izigaba zoyilo lwakho. I-bamboo lukhetho olukhulu xa ufuna into eyahlukileyo kancinci kunesiqhelo somthi wakho, ufuna ukuhlala ulungile, kwaye ufuna izinto ezihlala ixesha elide, ezingapheliyo phantsi kweenyawo zakho.
Uboya -Ikhaphethi yoboya, ayisiyiyo kuphela i-eco-friendly flooring, ikwakhona yomelele, i-hypoallergenic, kwaye inegalelo kumgangatho womoya ongcono ekhayeni lakho. Iigusha zichetywa rhoqo kwiinyanga ezili-9-12, ezenza uboya bube sisibonelelo esinokuhlaziywa ngokupheleleyo esinempembelelo encinci kwindalo esingqongileyo. I-100% lekhaphethi yoboya ikwanokuhlazeka kwaye iya kubola ngokupheleleyo ukuba ingcwatyiwe.
Zininzi ezinye izibonelelo ezilungileyo zokusebenzisa ikhaphethi yoboya ekhayeni lakho. I-hypoallergenic, isebenza njenge-insulator, kwaye inezixhobo ezithatha izandi. Uboya sesinye sezona zixhobo zomgangatho ezomeleleyo ezifumanekayo, zine-elasticity ephezulu ngokwendalo, okuthetha ukuba iyakubuyisa ngokulula ukusuka ekucinezelweni, kwaye ubukhulu boboya buthetha ukuba buya kugcina imbonakalo entle kwiminyaka emininzi ezayo.
Ioyile yendalo eboyeni iyenza ukuba ibe ngumhlaba kunye nolwelo olumelana nayo kwaye kunzima ukuyidyobha. Enye inzuzo kwiboya kukuba ayikwazi ukumelana nelangatye, ayinyibiliki, ayikhuphi misi inetyhefu, iyatsha kancinci, kwaye iyakwazi ukuzicima. Uboya buya kwidayi ngokulula, buhle, bomelele, kwaye buzinzile, busenza ukuba bulingane nakuliphi na ikhaya.
ILave Stone -I-Lava Stone yenze ukusasazeka xa yafika kwindawo yentengiso kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ekuqaleni yayisetyenziswa ikakhulu njengee-countertops, kodwa ngoku siyayibona kwiithayile ezintle zomgangatho. Ngelixa ngesiqhelo ngekhe ucinge ngelitye eliqingqiweyo njenge-eco-friendly, iLava Stone ayifani. Ilitye leLava lokwenyani likrolwe ngesandla kumathambeka eentaba-mlilo eFrance nase-Itali. Ngenxa yokuba yenziwe ngodaka oluqinileyo, sisixhobo esihlaziywa rhoqo.
Ilitye leLava yenye yezinto ezibiza kakhulu eziphantsi komhlaba ezihlaziyiweyo phaya, ke ukuba uhlahlo-lwabiwo mali, igumbi lokuhlambela elincinci lingayindawo entle yokubonisa eli litye lihle. Eli litye elingaxoliyo, elenza ukuba liphantse lingenakuchukunyiswa ngamabala kunye nokuba linganyangeki. I-slab nganye enqunyiweyo yenye yoluhlobo, inokufakwa i-glazed kwaye iza noluhlu olubanzi lwemibala ukuze uqiniseke ukuba umgangatho wakho weLava Stone wahluke ngokwenene. Ngenxa yobume belitye kunye nendlela elitshiswe ngayo, inemvakalelo egudileyo kodwa ijongeka ngathi iqhekekile kwaye iyaphambana, ngokwenene yenye yezona zinto zintle kakhulu zetheko ezikhoyo.
Ikhokho - Ikhokho, elenziwa ngokuvuna amaxolo ohlobo lomthi we-Oak, awowenzakalisi umthi kwaye ufuna ukulungiswa okuncinci ukuze ujike ube ngumgangatho. Ukuqinisekisa ukuba i-cork yakho i-eco-friendly flooring, qiniseka ukuba i-installer yakho isebenzisa i-adhesives engekho yityhefu kwaye iphelile. Ikhorki ishushu, ifunxa ifuthe ngoko ke kuyathandeka ukuhamba okanye ukuma kuyo, ukumelana nezinambuzane, kwaye iza kukhetho olukhulu lweepateni zendalo kunye nemibala. Ikhorkine ikwanayo ne-hypoallergenic, iyamelana nomlilo, kwaye iyaziphilisa, oko kuthetha ukuba iyamelana namazinyo kunye nokukrwela.
Xa uhamba kwikhokho, uyakuqaphela kwangoko ukuba iinyawo zakho zithambile, awuyi kuvusa usana xa uzikroba phambi kokuba ungene ebusuku! Uyakuqaphela kwakhona ukuba ayiphantse ibe nzima emadolweni okanye ngasemva, kungenxa yokothuka kwendalo kwiipropathi ezinayo. Kuluyolo ngokwenene ukuma phambi kwesitovu sakho kangangeyure ukuba unemigangatho emihle yecork phantsi kweenyawo zakho. Ayisiyonto kuphela ukuba ukhululekile ukuhamba kwaye kulula ukuyigcina, iya kuzisa ukukhanya okufudumeleyo naphina uyisebenzisa.
into entsha into eboleke into eblue
Linoleum - I-Linoleum ngumgangatho womgangatho owenziwe ngomgubo weenkuni, i-jute, i-rosin, ioyile ye-linseed, kunye nee-pigment ezahlukeneyo, ayinayo i-VOC's, kwaye iyabola Abanye abathengisi babhala i-vinyl flooring njenge-linoleum, okanye basebenzise amagama ngokungafaniyo, ke qiniseka ukwenza umsebenzi wakho wasekhaya xa ujonga i-linoleum flooring.
Yintoni eyenza i-linoleum ibhenele ngakumbi kukuba inokunqunyulwa ngayo nayiphi na imilo, ikuvumela ukuba wenze iipateni ezintsonkothileyo kunye nemizobo esemgangathweni, ukuba unqwenela. Yinto ehlala ihleli kwaye iya kujongeka intle ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-50 phantsi kweemeko eziqhelekileyo zokunxiba kunye neenyembezi. I-Linoleum ikwindawo yokulwa neentsholongwane, nto leyo intle ukuba unabantwana abathanda ukuziqengqa phantsi. Kwaye, ngenxa yokuba inezinto ezichasayo, uthuli kunye nokungcola akuyi kubambelela kuyo, nto leyo eyenza ukuba ibe lukhetho olukhulu kwabo banesifo sothuli kunye nezinye i-aleji zangaphakathi.
kuchaphulo olu ubuhlobo nentombi yakho
I-Linoleum iza kuyo yonke imibala yomnyama, ukuyenza ilungele nayiphi na imibala yemibala okanye uyilo lobuhle. Yifakelwe ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba uyawuthanda umgangatho wakho ekhayeni lakho njengoko ubuthandile kwigumbi lokubonisa.
Nokuba uhlengahlengisa ikhaya elidala okanye wakha elitsha, jonga kumgangatho ococekileyo we-eco. Khumbula ukuthathela ingqalelo izinto eziyimfuneko kufakelo kwaye ukhethe ikhaphethi yokuncamathelisa kunye nezinto zokuncamathelisa ezenziwe ngezinto zendalo, ezinobuhlobo. Awusenamda kwi-bland, izinto ezibizayo, ukuqhuma kweemveliso ezinobungozi kuthetha ukuba nantoni na isitayile sakho okanye uhlahlo-lwabiwo mali, kukho umgangatho wakho.
Iindidi zeZinto zoMgangatho - Ubunjineli boMgangatho oLukhuni eKhitshini - Isoftware yoyilo lwangaphakathi
ukuqala njani isicakakazi sentetho yewonga
yintoni ukunxiba okusesikweni
izipho kutata womtshakazi
U amy schumer wadibana njani no chris fischer
apho ebhayibhileni ithetha ngothando
ukubhala isicakakazi sentetho yokubekeka
imela yekhekhe lomtshato kunye neeseti zeseva